नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले लिए राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पद तथा गोपनियताको शपथ : भन्छन्-'म राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन आएको हुँ' | Kendrabindu Nepal Online News
33328650 1002669 7678704 24647277
नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले लिए राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पद तथा गोपनियताको शपथ : भन्छन्-‘म राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन आएको हुँ’
१ आश्विन २०७७, बिहीबार १८:०१
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका छन् । उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले गौतमलाई मनोनित गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले उनलाई शपथ खुवाएका हुन् ।
नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सभामा कूल ५९ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । कूल सदस्यमध्ये सात प्रदेशबाट आठ आठ जना निर्वाचित भएर आउँछन । बाँकी रहेका तीन सदस्यलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अहिले रामनारायण विडारी र विमला राई पौड्याल राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसद रहेका छन् भने डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई वर्षे पदावधि पूरा गर्दै गत फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाबाट बाहिरिएका थिए । उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट बाहिरिएसँगै राष्ट्रिय सभाको एक सीट रिक्त रहेको थियो । रिक्त रहेको एक सीटमा गत फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यक्ष गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । पराजित सदस्यलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयको विरोध भएपनि गत भदाै २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे थियो ।
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नवनियुक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले आफू राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन आएको बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम अधिकार र नेपाली जनताप्रति सधैं बफादार भएर कर्तव्य निर्वाह गर्ने बताएका छन् । शपथ लिएपछि गौतम साढे ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नेछन् । गत फागुन २१ देखि ६ वर्षको अवधि हुने भए पनि सरकारले निर्णय नगर्दा ६ महिना मनोनीत कोटाको एक सीट रिक्त रहेको थियो ।
गौतमको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहभागी भएका थिए ।
बस्याल समसामयिक राजनीतिमा कलम चलाउँछन् ।
नेकपा उपाध्यक्ष गौतम, राष्ट्रिय सभा सदस्य
Prevआर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ४८ अर्ब राजश्व संकलन
फिफा वरियतामा नेपाल यथावतNext
नेकपा विवाद फेरि सतहमा, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसले मार्ला बाजी ?
१८ राष्ट्रिय सभा सदस्यले बुधबार शपथ खाने
राष्ट्रिय सभाको १८ सिटका लागि ४५ उम्मेद्वार, नेकपा बढ्दै, कांग्रेस खुम्चँदै
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्न सांसदको माग
राष्ट्रपतिद्वारा एसिड आक्रमण सम्बन्धि अध्यादेश जारी
सभापति देउवा विरुद्ध असन्तुष्ट पक्षका २७ जनाले बुझाए हस्ताक्षर
बैतडीमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कोरोनाको जोखिम बढ्यो
भरतपुर अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितका बिरामी ह्वात्तै घटे
कोरोनाबाट विश्वमा कूल सङ्क्रमित मध्ये दुई करोड ४६ लाख निको भए
भारतमा निको हुने कोरोना संक्रमितको संख्या ५० लाखभन्दा बढी